Iiprojekthi Ze-Diy | December 2021
Iikiti ezili-10 eziSheduli eziGqibeleleyo zokuThenga kwi-Intanethi- Izinto eziGcinwayo zoGcino lwe-DIY
Ezi khithi zokuphalaza ziyafumaneka eAmazon naseKhaya eDepho, kwaye ziya kusiwa kanye ekhayeni lakho. Kwaye, beza nazo zonke izixhobo, izixhobo zekhompyutha, kunye nemiyalelo oyifunayo ukuze ubakhe.
Yintoni ipeyinti yobisi?
Ipeyinti yobisi yipeyinti enobuhlobo kokusingqongileyo eyenziwe ngokulula, i-100% yezithako zendalo njengodongwe, iprotein yobisi kunye nekalika- kunye namanzi asekwe kuyo. Ayiyityhefu, inokuboliswa ziintsholongwane, kwaye ayivumeli imisi enobungozi kwaye yome phantsi kwemizuzu engama-30- ngokungafaniyo neeyure ezingama-24 ezifunekayo kwiipeyinti zeoyile. Ipeyinti yobisi ikwathengiswa ifomathi-kuyakufuneka uyixube namanzi ukwenza ipeyinti engamanzi.
Uyenza njani iMithunzi yaseRoma -Izithunzi zaseRoma eKhaya
Ukuba unomatshini wokuthunga kunye ne-drill ekhaya, ungenza ngokwakho iirish shades. Ezi zigqabi zithandwayo, zitsalwe ngumtya ziyintandokazi yoyilo.
Indlela yokuxhoma isipili-eyona ndlela yokuxhoma isipili kwiDrywall
Sonke siyazi ukuba isipili esibekwe kakuhle yindlela elula yokuguqula igumbi, lisenza sibonakale siqaqambile kwaye sivulekile ngakumbi ngokubengezela kokukhanya macala onke. Kodwa ukuxhoma isipili esikhulu sodonga kunokuba yinto eyoyikisayo — yaye ukuba akunakwenziwa kakuhle, kunokuba yingozi. Ke sicele umntu osebenza endlini ukuba asibonise eyona ndlela yokuxhoma isipili esingaphezulu kwindawo eyomileyo yokuqinisekisa ukuba ikhuselekile ngokupheleleyo.
Ipeyinti ye-Matte okanye i-Flat Paint-Yintoni na kwaye uyisebenzisa njani?
Phambi kokuba ukhethe ibrashi yepeyinti, uya kufuna ukwazi ukuba yeyiphi na into oyisebenzisayo- nokuba ilungile kumphezulu othile owukhethileyo kwi-DIY. Enye yeepeyinti ezithandwa kakhulu kukugqitywa kweplati, kodwa yintoni na? Landela esi sikhokelo siluncedo kwaye ufumane yonke into oyifunayo malunga nepeyinti ethe tyaba.
I-Ayfraym Cabin Ekhaya elungiselelwe kwangaphambili linokuba Lakho nge $ 112,000
I-Ayfraym imalunga nokubonelela ngeekiti ze-diy eziza kukuvumela ukuba wakhe ikhabhathi yakho. Ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni- oko kuthetha ukuba sowuza kuba ngundaba-mlonyeni edolophini.
Indlela yokwenza Amakhandlela Abaqalayo ekhaya
Indlela yokwenza amakhandlela ekhaya ngokukhuselekileyo kubaqalayo. Isikhokelo esilula kumakhandlela enziwe ekhaya enamanyathelo ama-3 akhawulezayo.
Izinto ezi-6 ekufuneka uzazi ngaphambi kokudala udonga lwebhodi ekhayeni lakho
I-FYI: Udonga lwebhodi ebhodini akufuneki lube mnyama.
I-50 yeChic yasekhaya yokuHombisa iiMbono-Uyilo olulula lwangaphakathi kunye neengcebiso zokuhombisa ukuzama
Unako ukujongana nayo nganye yezi zimvo zekhaya ngosuku olunye kodwa iziphumo ziya kujongeka ngathi kuthathe ixesha elide ukuzikhupha. Khuthazwa zezi ngcebiso zingama-50 zincinci kodwa zinamandla kwaye uzizame ngokwakho.
Upeyinta njani Igumbi elinjengePro
Ngaba unezindonga ezimbalwa zokupeyinta? Landela eli nyathelo ngenyathelo lokufundisa ngobuso obujongeka njengobungcali.
Indlela yokuGqibezela iikhabhathi zasekhitshini ukuze ujongeke eNtsha-Ukuhlaziya i-101
Ukuba ikhitshi yindawo yemidlalo yeqonga, ke iikhabhathi zizinto zokubonisa. Ziqulathe iziqholo ezimibalabala, kunye nezixhobo eziyimfuneko zokwenza umboniso.
Indlela yokuKhanyisa iZiko leMlilo ngeMithi
Indlela yokukhanyisa indawo yokubasa umlilo ngokwakha imfumba yeenkuni evutha ngokucocekileyo. Indlela yokwakha umlilo ohlala ixesha elide kwindawo yokubasa umlilo okanye isitovu seenkuni.
Uyenza njani inkohliso iMarble Countertop usebenzisa iGiani's Paint Kit
Ukuba ungaphezulu kwezandla zohlobo lomvuseleli wasekhaya, nangona kunjalo, iiprojekthi ze-DIY azingomsebenzi kwaye zinomdla wokuzonwabisa. Ke, kutheni ungenzi iprojekthi yakho elandelayo enye yeencwadi ngokuguqula igumbi lokuhlambela okanye izinto zokubala zasekhitshini zibe yinto efanelekileyo yamehlo entliziyo? Ngaphantsi kwama- $ 90 ungajika izinto zokubala zakho zemarble ngale kit yokupeyinta ingakholelekiyo.
Iiprojekthi ezili-10 zeFenitshala zeFenitshala ngo-2018
Ukusuka kwiibhodi zeentloko ukuya kwiitafile zokuhlala, ezi projekthi zefanitshala ze-DIY ziya kongela imali (kunye nococeko).
Uyenza kanjani i-DIY yeFeksi yeMarble ye-Faux-Paint Marble-Uphononongo lweKhithi yeMarble yeMarble
Sivavanye iGiani Marble Countertop Paint Kit ukuguqula isiqithi sasekhitshini sibe yimbumbulu. Jonga indlela esenze ngayo-kwaye ubone iziphumo!
Isikhokelo seBhedi ye-DIY Pallet Isikhokelo kunye nesifundo seVidiyo
Iipaneli zebhedi ze-DIY yindlela elula, efikelelekayo yokufumana umatrasi wakho phantsi. Bukela isifundo sethu sevidiyo okanye ufunde isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo indlela yokwenza ngayo.
Isikhokelo sakho kwiiNdawo eziLinganisiweyo zoShelulo
Ngaba uhlala kwikhaya elinendawo encinci? Ewe, iishelfu ezidadayo ziyimpendulo yakho. Ezi shelufu zifakwe eludongeni azinazo izibiyeli, ezibenza ukuba zibonakale ngathi ziyadada kwiindonga zakho-kwaye zenzela ukungqubana okuncinci. Nantsi indlela yokuxhoma ezo zishelufa zintantayo.
Uwuhlaziya njani uMlilo-Into oyifunayo ukuze uphinde usebenze endaweni yoMlilo
Bendihlala ndicinga yonke into endifuna ukuyazi ndiyifunde enkulisa. Ngokucacileyo yonke into endifuna ukuyazi ndingayifunda kwiYouTube. Ubuncinci yile nto ndiyifumene kutshanje ngenkqubo yokulungisa indawo yomlilo nomyeni wam emva kokubukela iividiyo ezingama-213,987 zeYouTube.
Uyilungisa njani iGrout eqhekeziweyo kumgangatho wethayile - Iingcebiso zokuLungisa iThayile
Zimbalwa izinto ezibuhlungu ukujongwa njengegrout eshiya kude iithayile zakho ezigqibeleleyo. Nazi iingcebiso zenyathelo ngenyathelo kunye nobuchule bokulungisa i-grout eqhekekileyo kumgangatho wakho wethayile.
Iingcamango ezingama-30 zoGcino luka-DIY-iZisombululo zoGcino lweKhaya eziLula
Ukuba indlu yakho igcwele ukungqubana, lixesha lokuba usikhuphe isixhobo sakho ukusombulula le meko kube kanye. Ezi zimvo zokugcina kunye nezisombululo ziyilelwe ukucwangcisa kunye nokuhlengahlengisa ezona ndawo zineengxaki zekhaya lakho.
Izibane zekrisimesi ziboniswa endlwini
indlela yokwenza kwakhona iikhabhathi zasekhitshini
lodonga kwigumbi lokuhlambela
onokutyala ntoni ngo-apreli